Dagaalo culus oo diyaarado dagaal ka qeyb qaateen oo ka dhacay duleedka Boosaaso – idalenews.com
Dagaalo culus oo diyaarado dagaal ka qeyb qaateen oo ka dhacay duleedka Boosaaso
Faah faahi ayaa ka soo baxeysa dagaalo culus oo shalay ka dhacay deegaan ilaa 40-KM kaga beegan magaalada Boosaaso, halkaasoo ay isku fara saareen Ciidamada Puntland iyo Xoogaga Al-Shabaab ee saldhiga ku leh Buuraha Golis.
Sida ay sheegayaan wararka dagaalka ayaa waxaa ka qeyb qaatay diyaarado dagaal oo la sheegay inay lahaayeen Shirkada SARACEN oo Puntland ka gacan siisa tababarka Ciidamada iyo la dagaalanka burcad badeedka.
Inkastoo aan si dhab ah loo ogeyn qasaaraha rasmiga ee dagaalka ka dhashay, ayaa hadana waxay wararku sheegayaan in labada dhinac uu ka soo gaaray dagaalka dhimasho iyo dhaawac.
Afhayeenka howl galada Al-Shabaab Sheekh C/casiuis Abuu Muscab ayaa sheegay in Ciidamada Puntland ay duulaan ku soo aahaayeen deegaanada ay ku sugan yihiin, isla markaana qorshahooda ahaa inay soo weerareen, hase ahaatee ay ka hortageen.
“Mujaahidiinta waxay ku jebiyeen dagaalkaas cadawga oo watay 18-gaadiid, waxaa taageerayay diyaarado dagaal oo ay leedahay Shirkada SARACEN”ayuu yiri Abuu Muscab oo sheegay in deegaanka Ceelaayo uu dagaalka xoogiisa ka dhacay.
Maamulka Puntland ayaan wali ka hadlin dagaalka, inkastoo saraakiisha hogaamineysa howl galka laga soo xigtay in tiro dagaalyahano ay ku dileen dagaalka, halka qaarna nolosha ku soo qabteen.
Xoogaga Al-Shabaab ayaa bishii la soo dhaafay weeraro ku qaaday fariisimo ciidamada Puntland ku lahaayeen duleedka Boosaaso, waxaana Isniintii la soo dhaafay ay sheegteen weerar is qarxin ah uu ka bad baaday Taliye kuxigeenka Booliska Puntland.
Al-Shabaab oo dil toogasho ku fulisay mid ka mid ah dad Kenyan ah oo gacanta ay ku heyso
Wasiirada A. dibada Soomaaliya oo ugu baaqday Golaha Ammaanka in la qaado cunaqabateynta hubka